Vaomieran'ny Kolontsaina | FKMP
KOLONTSAINA MALAGASY sy ny Fiangonana…
Ny vaomiera ny Kolontsaina no mpandrindra sy mamerina ny fampitana fampianarana ireo hai-riba sy haren-tsaina ny Ntaolo malagasy amin’ny alalan’ireo teny malagasy, tantaran’ny firenena, fomba amam-panao nentim-paharazana (fora-zaza, ala volon-jaza, sns…), lalao toy ny fanorona, katro, ady ravina, ho an’ny solofo sy dimby ary taranaka amam-para, eny na ho an’ireo olona te handalana ny soa toavina maha-malagasy aza.
Vaindon-draharaha ny mampita ny kolon-tsaina malagasy indrindra ny teny Malagasy amin’ireo taranaka, dimby sy fara, hitondra ny FKMP afaka fotoana vitsy dia vitsy, koa anisan’izany ny Fampianarana ny teny malagasy ireo ankizy 4-12 taona.
Ireo hetsika efa nandraisany anjara…
– Fandraisana anjara lehibe tamin’ny fanomanana ny fetim-piangonana :
Ankizy : filalaovana tantara sy angano an-dapihazo (teatra), dihy sy ny vako-drazana
Lehibe sy ny tanora : don-tany sy kapo-tandroka.
– Fetin’ny Reny sy ny Ray : fanaovana tsianjery sy hira ho fahatsiarovana sy fankalazana ilay andro natokana ho an’ireo Raiamandreny loharano nipoirana, nahitàna masoandro.- Fetin’ny Noely : fandraisana anjara amin’ny tsianjerin’ny noely.- Fandraisana anjara tamin’ny « koranam-pianakaviana », izay fety sy lanonana nokarakarain’ny fiangonana.
– Fanohizana hatrany ny ezaka ho an’ny dimby sy fara hankafy ary ho tia ampiasa ny teny malagasy, Ho tia ny vita, ny teny, ny olona, ny tany, … malagasy, hanana ambom-po malagasy.
« Fa izay tia Tanindrazana , tia Tenindrazana »– Hampianatra ny lalao « Fanorona » ireo ankizy.- Hiezahana ny hitantara angano (hisy boky amin’izany).- Fandraisan’ny ankizy anjara eo amin’ny hetsika rehetra eto amin’ny FKMP.
Fotoana fampianarana ireo ankizy
Isaky ny alahady aorian’ny Sorona Masina.
Mpandrindra ny Vaomieran’ny Kolontsaina